Vaovao - Ohatrinona ny vidin'ny lamba boaty 3M
Ohatrinona ny vidin'ny lamba boaty mazava 3M
Ho an'ireo namana te hanao takelaka lamba boaty maivana 3M, ny tena manahirana dia ny vidiny, ohatrinona ny iray metatra toradroa, raha mihoatra ny teti-bolany, na raha tsara ny kalitao dia mila misalasala izy ireo mampiasa azy. Na izany aza, raha diso ny fanontanianao, izay mitarika amin'ny fandaozana ny fampiasana fitaovana 3M, mampalahelo ve izany?
Noho izany, tokony ho fantatsika ny antony maha samy hafa ny vidin'ny sarimihetsika lamba boaty hazavana 3M.
tsy mitovy ny fitaovana
Lamba ambany 3M, misy endrika malefaka, matevina manify, tanjaka ambany ranomaso, ary tsy misy fahasamihafana amin'ny fahatsapana tanana amin'ny lamba boaty tsotra. Ny lamba boaty jiro 3M tena izy dia mahatsapa ho matanjaka sy matevina kokoa rehefa mitazona eo am-pelatananao.
ny vanim-potoana fampiasana dia tsy mitovy
Raha ampitahaina amin'ny vidin'ny lamba boaty mazava 3M, ny ambany dia mora kokoa, fa ny fiainana fanompoana kosa samy hafa be ihany. Ny vokatra tena izy dia manana antoka maharitra telo taona, saingy azo ampiasaina mandritra ny 4 ka hatramin'ny 5 taona, raha ny lamba ambany kalitao kosa tsy manana antoka ara-kalitao. Raha tsara vintana ianao dia azo ampiasaina mandritra ny 3 taona. Raha ratsy kokoa ny kalitaony dia 2 taona ihany.
raha ny vokatry ny jiro dia tsara ny vokany tamin'ny voalohany fa rehefa afaka kelikely dia haseho ilay lamba ambany 3M
Ary koa, ny vidin'ny lamba boaty kely 3M amin'ny ankapobeny dia manodidina ny folo dolara, ary ny vidiny dia mizara ho antoka 3 taona sy antoka 5 taona. Amin'ny ankapobeny, ny fiantohana 5 taona dia lafo avo roa heny noho ny fiantohana 3 taona. Hevitra manan-danja amin'ny famaritana kalitao ny lamba boaty fahazavana 3M: ny hateviny, ny tanjaka amn'ny hery, ny fikojakojana, ny fanoherana ny toetr'andro, ny fandefasana hazavana, ny tsy fahampian'ny lelafo, ny haavon'ny peeling, ny fisaka, toy ny fidiran'ny ranomainty, ny fananganana loko, sns.
Ho an'ny fanontana inkjet. Ny lamba boaty maivana 3M dia mizara ho karazany telo araka ny fizotry ny famokarana: lamba boaty jiro manaparitaka antsy, lamba boaty maivana ary mampita lamba boaty mazava.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny lamba ambany kalitao dia malefaka ary ambany ny fanoherana ny ranomaso, noho izany tsy mahatohitra rivotra mangatsiaka sy rivotra mahery izy. Mitsoka matetika ny rivotra mahery, ary mihodina sy miverina ny sary, ary ratsy ny fantsona, ka mahatonga ny sary tsy hitovy.